July 2, 2020 - PARIJATMEDIA
‘शान्ति’ खोज्दै स्वस्तिमा, हेर्नुहाेस् १५ तस्विर
दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि घरमै रहँदा पक्कै पनि मानिसहरूलाई आनन्द र शान्त ठाउँको खोजी हुनु स्वभाविक नै हो । लकडाउनका कारण मानिसहरू तनावमा छन् । अझ, चलचित्रको पर्दामा दैनिक रमाउने र काममा व्यस्त हुने कलाकारहरूका लागि त लकडाउनले उकुसमुकुस नै बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कलाकारले दर्शकलाई आनन्द प्राप्त गर्ने उपाय त सेयर गरिरहेका छन् । तर उनीहरू आफैँलाई पनि शान्त र आनन्द प्राप्त हुने स्थानको खोजी भइरहेको छ । नायिका स्वस्तिमा खड्काले हालै एक तस्वीर सेयर गर्दै ‘शान्ति’ लेखेकी छिन् । स्वस्तिमाले पनि लकडाउनका कारण उकुसमुकुस भएको बताउँदै आएकी थिइन् । स्विमिङ पुलमा रमाउँदै गरेको यो तस्वीर लकडाउनकै समयको हो या पहिलेको हो उनले खुलाएकी छैनन् । तर जेठ महिना सकिँदै गर्दा बढ्दै गएको गर्मीका कारण पनि स्विमिङ पुलमा रमाउने चाहना धेरैको हुन्छ। कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर सेयर ग
नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डि’भोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २० सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको दाम्पत्य जीवन सफल हुन सक्छ । १) श्रीमतीको मूडको ख्याल राखेर ब्यवहार गर्ने २) श्रीमतीका साथीहरूको सम्मान गर्ने र श्रीमतीकै साथी बीच बसेर कुरा सुनीदिने। ३) आफ़्ना परिवार र साथीभाई माँझ श्रीमतीको प्रशंसा गर्ने। ४) फेसबुकमा कुनै केटीको फोटोमा लाइक कमेंट्स गर्नुअघि ख्याल गर्ने ५) काली, परी, माया, बेबी र मेरो महारानी भनेर बोलाउने । ६) कुनै अन्य राम्री केटी संग तुलना गर्दै नगर्ने। बरु नराम्री केटीको फ़ोटो देखाएर यो भन्दा राम्री त तिमी छौ भनी मक्ख पार्ने। ७) श्रीमतीका कुरा सुन्ने र सकेसम्म् उनको माग अनुसारको सपिङ गर्ने। ८) श्रीमतीले बोलेको जोक्समा हास्ने र दुःखको कुरा गरे, ह
“कुकुरसँग रमाउँदै पुजा”(फोटो फिचर)
नेपाली अभिनेत्री पुजा शर्मा बेलाबेलामा चर्चामा अाइरहन्छिन्। कहिले झ गडा त कहले पारिश्रमिकका कारण उनको चर्चा हुने गर्छ । उनले लिएको पारिश्रमिकलाई मान्ने हो भने उनि नेपालकी सर्वाधिक महंगी अभिनेत्री भनेर पनि चिनिन्छिन् । केहि पहिला उनले चलचित्र पोइ पर्यो कालेमा २० लाख रकम लिएर अनुबन्धित भएको बिषयले पनि निकै चर्चा पायो। उनि केहि समय अघि अर्कि नायिका सुष्मा कार्कीसँगको बिवादका कारण चर्चामा थिइन् । भने पछिल्लो सयम एक अन्तर्वातामा नेपालका जिल्ला र प्रदेशको संख्या बताउन नसकेपछि ट्रोलको शि कार बनिन् । उनले चलचित्र अझैपनि, चंखे शखे पंखे, प्रेम गीत, मधुमास, म यस्तो गीत गाउँछु र रामकहानीमा काम गरिसकेकी छिन् । पुजाका अहिलेसम्मका चलचित्र हेर्ने हो भने व्लकवस्टर चलचित्रको एउटा मात्रै हो भन्न सकिन्छ, प्रेमगीत' । त्यस बाहेक अझैपनि, चंखे शखे पंखे, मधुमास सफल हुन सकेनन्'। रामकहानी, म यस्त
बिर्तामोड- प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पार्टी भित्रै घराबन्दीमा पारिएको र राजीनामा गर्न बाध्य पार्न खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा ओली समर्थकहरूले बिहीबार आज प्रदर्शन गर्दै छन्।झापाको विर्तामोडको मुक्ति चोकमा बिहीबार अपरान्ह ३ बजेका लागि प्रदर्शन गर्न लागिएको नेकपाका युवा नेता टिका मग्रातीले जानकारी दिए।सत्तारुढ पार्टी सम्बद्ध भातृ संस्थाका युवाहरू प्रदर्शन निस्किने बताइएको छ। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव जिताएर पठाएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाउने षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्न ओली जिताउन खटिएका युवा प्रदर्शनमा उत्रने मग्रातीले बताए। नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा चट्टानी अडान लिँदै भारतका विरुद्ध उभिनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले झापड हान्न सुरु गरेको छ । भारतीय डिजाइनमा नेपालभित्र अब पूर
युट्युबर तथा मोडल सोनिका रोकाया आफ्नो अभिव्यक्ति र यूटयुवमा दिअर्थी लाग्ने अन्तरवार्ता लिएर सधैँ चर्चामा आइरहन्छिन् । समाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा सोनिका डर्टि रोकाया नाम रहेको एकाउन्ट चलाउँदै आएकि सोनिकाले हट तस्बिरहरु सार्वजनिक गर्दै आएकि छिन् । उनले काठमाडौंको दरवार मार्ग स्थित उड ल्याण्ड कम्पेलेक्सको पहिलो तल्लामा रहेको लिक्इड लाउन्च संचालन गर्दै आएकि छिन् । केहि दिन अघि उनको क्लबमा पुर्व युवराज पारश शाहले भ्रमण गरेपछि रोकाया फेरि चर्चामा आएकि छिन् । सोनिकाको खास नाम पूजा रोकाया हो । उनी पूजाबाट सोनिका बन्नुका पछाडि पनि अनेकन कारण छन् । बझाङ, छान्नास्थित माझीगाउँको मध्यम किसान परिवारमा जन्मिएकी हुन् उनी । उनका हजुरबुवादेखि बुवासम्म समाजसेवामा छन् । उनका बुवा बर्खबहादुर रोकाया बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । द्वन्द्वकालमा उनका बुवाको
प्रेरित गर्ने भनाइहरु – तिमी अहिले जहाँ छौ, त्यही नै तिम्रो लागि ठूलो अवसर हो
प्रेरक भन्नुको अर्थ के हो ? पक्कै पनि प्रेरक भन्नुको अर्थ यस्ता कुराहरु जसले हाम्रो भावना बुझेको प्रतित हुन्छ । यहाँ त्यस्तै १५ भनाइहरु राखिएको छ जसले हाम्रो भावना बुझ्छ । हाम्रो आदर्शका कुराहरु गर्छन् र हामीलाई केहि ज्ञान दिन्छन् । तपाईलाई यी १५ महान् भनाईहरु पढ्दा कस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला । मन परेमा तपाईले यसलाई सेयर गर्न पनि सक्नु हुन्छ । हामी सकारात्मक सोचमा यस्तै मन छुने तथा जीवन बदल्ने कुराहरु लेखिरहेका हुन्छौँ । १. तिमी अहिले जहाँ छौ, त्यही नै तिम्रो लागि ठूलो अवसर हो। २. पैसा हुनु तर दिमाग नहुनु भनेको सधै खतरनाक स्थिति हो। ३. सफलताको सुरुवात बिन्दु भनेको सपना देख्नु हो। ४. काम गर्नको लागि अनुकुल समय पर्खेर नबस । समय कहिल्यै पनि अनुकुल हुँदैन । ५. खुशी आफ्नो कर्ममा भेटिन्छ। ६. असफलता भनेको तिमीलाई अझ बढी जिम्मेवारीको लागि तयार बनाउने एउटा प्राकृतिक
सपनामा देखिएका कतिपय कुरालाई ध्यान दिन सकियो भने भविष्यमा आइपर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भने आगामी दिनमा जीवनमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी पाउन सकिने धार्मिक विश्वास रहेको छ । सपनामा देखिएका कतिपय घ’टनाले तपाईको आगामी दिनको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने धार्मिक विश्वास रहेको छ । सपनामा देखिने कतिपय जीव जनावर, वस्तु, सामाग्रीले के अर्थ दिन्छन् त ? माकुरा: माकुराले टोकेको सपना देखे रोग लग्न सक्छ। भिक्षा: सपनामा भिक्षा लिएको-दिएको दुवै अशुभ हुन्छ। गरीबीले सताउन सक्छ। धुँवा: धन नाश, व्यपारमा हानी, मानसिक सन्ताप र प्रियजन विछोड हुन्छ। वर्षा: घनाघोर वर्षा देखे गृह क’लह र मित्र विछोड हुने संकेत हो। बिरालो: सपनामा बिरालो देखिए श’त्रु बढ्छ। हिलो: हिलोमा फसेको देखे क’ष्ट र अपव्यय हुन्छ। तारा: तारा खसेको देखे वि’पत्ती आइलाग्ने संकेत हो। फलामे वस्तु: सपनामा फलामका भाँडा वा वस्तुहरु द
“के प्रेम सम्बन्धपछि”: (विवाह गर्नैपर्छ)?
प्रेम गरेपछि विवाह गर्नैपर्छ प्रश्नले जवाफकर्तालाई दुई कित्तामा उभ्याउँछ । एकथरी भन्छन्, प्रेम र विवाह दुई फरक कुरा हुन् । प्रेम गर्दैमा विवाह गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अर्काथरी भन्छन्, प्रेमको अन्तिम विन्दु भनेकै विवाह हो । जब प्रेम विवाहमा रुपान्तरण हुन्छ, तब मात्र प्रेम-सम्बन्ध सार्थक हुन्छ । प्रेम गर्नुको अर्थ बैंशालु सुखभोग मात्र होइन । त्यसैले जोसँग प्रेम गरिन्छ, उसालाई भावी जीवनसाथीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । कतिपयले क्षणिक मनोरञ्जनका लागि प्रेम गरिरहेका हुनसक्छन् । अहिले त शरीरिक सम्बन्धका लागि जोडी बनाउने चलन छ । कतिले लहडमा प्रेमी/प्रेमिका बनाउँछन् । कतिले देखासेखीमा । कतिले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि यस्तो जोडी बाँध्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रेमी/प्रेमिकाको रुपमा जोडिन आउने जो कोहिसँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, कहिले काहिँ त्यस्तै प्रेमी/प्रेमिकासँग बिवा
“करिना कपुर भन्छिन्ः महिनाबारीको विषयमा केटा,केटीलाई शिक्षा दिनु पर्छ”
बलिउड अभिनेत्री करिना कपुरले महिनाबारीको विषयमा बोलेको विषयले बलिउडमा चर्चा पाएको छ । लण्डनमा विदा मनाएर फर्केकी करिनाले लखनउमा आयोजित एक कार्यक्रममा महिलाको महिनाबारीको विषयमा वालिकाहरुलाई शिक्षा दिनु पर्ने बताइन् । करिनाले भनिन्- सैफलाई छोडेर अर्जुनलाई विवाह गर्छु ! उनले महिनाबारीको विषयमा मानिसहरुको परंपरागत सोंचबाट आफूलाई दिक्क लाग्ने भन्दै करिनाले वालिकाहरुलाई महिनाबारीको बारेमा सबै जानकारी दिनु पर्ने धारणा राखिन् । लखनउमा आयोजित युनिसेफको कार्यक्रममा करिनाले महिलाको समस्याबारे पुरुषले समेत बुझ्नु पर्ने बताइन् । महिनाबारीका कारण युवतीहरुको पढाइ र अन्य काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै करिनाले महिला कुनै पनि काममा पछि नरेहको तर उनीहरुलाई मौका भने दिइनु पर्ने बताइन् । पूर्व प्रेमीसँग काम नगर्ने भन्ने पुरानो जमानाको कुरा करिना कपुरले बताएकि छिन् । विद्यालयमा केट
“सुहाना भन्छिन्, ‘म भगवान् कृष्णको फ्यान’ (हेर्नुहाेस् १५ तस्विरमा)
नेपाली फिल्ममा स्टार किड्सको प्रवेश दिन-प्रतिदिन बाक्लिँदै गएको छ । अनमोल केसी, सलोन बस्नेत, गौरव पहारी, निरिषा बस्नेतलगायत धेरैले माता वा पिताको बिँडो थाम्न अभिनयमा होमिएका छन् । चैत २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट फेरि नेपाली फिल्ममा एक स्टार किड्सको उदय हुँदैछ । सुहाना थापाले यो फिल्मबाट डेब्यू गर्दैछिन् । उनकी आमा झरना थापा नेपाली फिल्मकी नामी अभिनेत्री तथा निर्देशक हुन् । अमेरिकामा बसेर लामो समय अध्ययन गरिरहेकी सुहानालाई अभिनय गर्ने कुनै इच्छा थिएन । फिल्ममा प्रवेश नगर्ने अठोट बोकेरै उनी अध्ययनका लागि अमेरिका हानिएकी थिइन् । तर, पूरा परिवार नै फिल्ममा आबद्ध भएका कारण माता र पिताको आग्रहलाई सम्मान गर्दै उनी फिल्मकी हिरोइन भएकी छन् । आमा झरनाझैँ उनी लामो रेसको घोडा बन्न सक्छिन् वा सक्दिनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर, उनीबाट दर्शक र फिल